Dr. Tint Swe's Writings: Ductal carcinoma in situ နို့ပြွန်ကင်ဆာ
Ductal carcinoma in situ နို့ပြွန်ကင်ဆာ
၁။ ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော်၏ဇနီး ဓါတ်ခွဲခန်း အဖြေပါ ။ ကျေးဇူးပြု၍ဖတ်ပြီး ဘာဆက်လုပ် သင့်တယ်ဆိုတာ အကြံပြု ပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
လူနာ အသက် မသိပါ။ ဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာ မသိပါ။ ဘာခံစားနေရလဲ မသိပါ။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ သမီးက ရင်သားကင်ဆာရောဂါခံစားနေရသူပါ။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှာ ရင်သားအကျိတ်တွေ့ပြီး တဖက် ဖြတ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ခီမိုဆေး ၆ ကြိမ်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်မကင်ခိုင်းလို့မကင်ခဲ့ပါဘူး။ ဆေးသွင်းပြီး တနှစ်ခွဲအကြာမှာ ခွဲထားတဲ့ချုပ်ရိုးပေါ်မှာအကျိတ်လေးတွေတွေ့လို့နောက်ထပ်ဆေ6းကြိမ်သွင်းရပါတယ်နောက်ပြီး xeloda 500mg ဆေးရော သောက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးသွင်းနေရင်နဲ့ ကျန်တစ်ဖက်နဲ့ ချိုင်းမှာ အကျိတ်တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ အခုအဲ့ဒါကိုထပ်စစ်ပြီးတော့ ဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ အခုအဖြေက ER PR Negative ပထမအကြိမ်စစ်တုန်းက Positive ဆရာ HER2–Equavocal (+ +) အဲ့ဒါကတော့နှစ်ကြိမ်လုံးအတူတူပဲ။ အဲ့ဒီအဖြေဆိုရင် Herceptin ဆေးသွင်းမှဖြစ်မှာလား မသွင်းရင်ရော ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်များတဲ့အတွက် မတက်နိုင်လို့ပါ။ သမီးအသက် အခု ၃၁ အပျိုပါဆရာ။ ကျေးဇူးပြု၍ဖြေကြားပေးပါရှင့်။
ရင်သားကင်ဆာဟာ အပေါ်ယံလွှာဆဲလ်အမျိုးအစားကနေ စတင်တယ်။ နို့ရည်ထွက် (ဂလင်း တစ်ရှူး) ကနေဖြစ်လို့ adenocarcinoma လို့လည်းခေါ်တယ်။ Sarcomas အမျိုးအစားကတော့ ရင်သားမှာရှိတဲ့ ကြွက်သား၊ အဆီနဲ့ တွယ်ဆက်တစ်ရှူးတွေကနေ ဖြစ်တာကိုခေါ်တယ်။ တခါတလေမှာ အမျိုးအစား တခုမကရောဖြစ်သေးတယ်။
ရင်သားကင်ဆာကို သူ့ထဲမှာပါနေတဲ့ (ပရိုတင်း) အမျိုးအစားအရလည်း ခွဲခြားနိုင်တယ်။ ဒါ့ပြင် ဟော်မုန်းအရလည်း ခွဲခြားတယ်။ hormone receptor-positive နဲ့ triple-negative တို့ဖြစ်တယ်။
• Ductal carcinoma in situ (intraductal carcinoma) DCIS အမျိုးအစားဆိုတာ နို့ထွက်ပြွန်လေးတွေမှာ ဖြစ်တာကို ခေါ်တယ်။ မဆိုးလှပါ။ ရင်သားကင်ဆာလူနာသစ်တွေထဲမှာ ၅ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ဖြစ်တယ်။ ပျောက်အောင်ကုလို့ ရတယ်။ အဖြစ်အများဆုံးရင်သားကင်ဆာဖြစ်တယ်။ ယူအက်စ်အေမှာ လူနာ ၆ သောင်းနှစ်စဉ်ဖြစ်တယ်။
အသက်စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ နောင်မှာ ထပ်ဖြစ်မှာကို သတိထားရမယ်။ နောက် ၅-၁ဝ နှစ်မှာဖြစ်တဲ့သူတွေမှာဖြစ်တယ်။ ဖြစ်နှုန်း ၃ဝ% ရှိတယ်။ ကင်ဆာအကျိတ်တခုတည်းသာခွဲထုတ်ပြီး ဓါတ်မကင်သူတွေ ၂၅-၃ဝ% နောင်မှာ ထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဓါတ်ကင်သူမှာ ၁၅% သာရှိမယ်။
ကင်ဆာဆေး Tamoxifen သုံးတယ်။ ဆေးကအီစထိုဂျင်ကို တားပေးတယ်။ နောင်မဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ hormone receptor positive cancers ကိုသာပေးတယ်။
• Invasive ductal carcinoma (IDC) ကို Infiltrating ductal carcinoma ပြန့်နေသော နိုပြွန်ကင်ဆာ လို့လည်း ခေါ်တယ်။ နို့ထွက်ပြွန်လေးတွေမှာ ဖြစ်တာပေမယ့် ဘေးကိုပြန့်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်။ တက်စေ့တွေဆီရောက်မယ်။ အဆီပြင်နဲ့ တခြားနေရာတွေဆီလည်း ပြန့်နိုင်ပြီ။ သွေးပြန်ရည်လမ်း ကနေတဆင့်ပြန့်တာဖြစ်တယ်။ သွေးကနေလည်း ပြန့်တယ်။ ဆိုးတဲ့ Invasive breast cancers အမျိုးအစား ရင်သားကင်ဆာထဲမှာ ၇ဝ-၈ဝ% က ဒါမျိုးဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာဖြစ်လည်းဒါမျိုးဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီး အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ကြီးသူတွေမှာပိုများတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသနည်းနဲ့ ဓါတ်ကင်နည်းနဲ့ကုသရမယ်။ အကျိတ်နဲ့ ဘေးနေရာတွေအပြင် လိုအပ်ရင် တက်စေ့တွေကိုပါ ထုတ်တယ်။ ကင်ဆာဆေးပေးနည်း၊ ဟော်မုန်းပေးနည်းနဲ့ Targeted Therapies ပစ်မှတ်ထားကုသနည်းတွေလည်း လုပ်တယ်။
• Invasive (infiltrating) lobular carcinoma (ILC) အမျိုးအစားဆိုတာ နို့ရည်ထုတ်ပေးရာ အိတ်လေးတွေကနေ ဖြစ်တယ်။ IDC လိုပဲ ပြန့်တယ်။ ဆိုးတဲ့ invasive breast cancers အမျိုးအစား ရင်သားကင်ဆာထဲမှာ ၁ဝ% က ဒါမျိုးဖြစ်တယ်။ mammogram နဲ့စမ်းရာတာခက်တယ်။
• အဖြစ်နည်းတဲ့ ရင်သားကင်ဆာအမျိုးအစားများ
- Inflammatory breast cancer ဆိုတာ ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ရှိတယ်။ ရင်သားကင်ဆာအားလုံးထဲမှာ ၁-၃% ရှိတယ်။ အကျိတ်အခဲတခုတည်းရယ်လို့ စမ်းမတွေပဲ ခဲနေတယ်။ နို့နာလို အပေါ်ယံအရေပြားမှာ နီရဲနေမယ်။ လိမ်မော်သီးအခွံနဲ့ တူနေမယ်။ နာမယ်။ ကြီးနေမယ်။ တင်းနေမယ်။ ယားနိုင်တယ်။
- Paget disease of the nipple အမျိုးအစားကင်ဆာ နို့ပြွန်ကနေစတယ်။ အရေပြား၊ နို့သီး၊ အရောင်ရင့်အဝိုင်း ရောက်လာမယ်။ ရှားတယ်။ ၁% သာရှိတယ်။ ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ကွဲအက်မယ်။ ကွာကျမယ်။ နီမယ်။ သွေးထွက်မယ်။ အရည်ထွက်မယ်။ ပူလောင်မယ်။ ယားမယ်။ ductal carcinoma in situ (DCIS) နဲ့ဖြစ်ဖြစ် infiltrating ductal carcinoma နဲ့ဖြစ်ဖြစ် တွဲနေမယ်။ နို့ခွဲထုတ်ပြစ်ရမယ်။
- Phyllodes tumor အမျိုးအစားဆိုတာ ရှားတယ်။ တွယ်ဆက်တစ်ရှူးတွေကနေဖြစ်တယ်။ Benign phyllodes tumor အမျိုးအစားခွဲဆိုရင် အကျိတ်နေရာသာသာလောက်သာခွဲထုတ်ဘို့လိုတယ်။ malignant phyllodes tumor ဆိုရင်တော့ ခွဲတာအပြင် ကင်ဆာဆေးလိုမယ်။
- Angiosarcoma အမျိုးအစားဆိုတာ သွေးကြော၊ သွေးပြန်ရည်ကြောကနေဖြစ်တယ်။ အရင်ဓါတ်ကင်ရာကနေ ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အလွန်ရှားတယ်။
• Special types of invasive breast carcinoma အထူးအမျိုးအစားများ
- Adenoid cystic (or adenocystic) carcinoma
- Low-grade adenosquamous carcinoma (metaplastic carcinoma)
- Medullary carcinoma
- Mucinous (or colloid) carcinoma
- Papillary carcinoma
- Metaplastic carcinoma (spindle cell and squamous)
- Micropapillary carcinoma
- Mixed carcinoma (invasive ductal and lobular)
ရင်သားကင်ဆာတချို့က ဟော်မုန်းနဲ့ဆက်စပ်တယ်။ (အီစထိုဂျင်) နဲ့ (ပရိုဂျက်စတီရုန်း) ရှိတယ်။ ရင်သားကင်ဆာ ဆဲလ်တွေမှာ အဲတာတွေကို ခက်ခံနိုင်တဲ့ receptors တွေရှိနေရင် ဖြစ်မယ်။
- Estrogen receptor (ER) positive ဆိုရင် (အီစထိုဂျင်) ဟော်မုန်းပေးရမယ်။
- Progesterone receptor (PR) positive ဆိုရင် (ပရိုဂျက်စတီရုန်း) ဟော်မုန်းပေးရမယ်။
- Hormone receptor (HR) negative ဆိုရင်တော့ ဟော်မုန်းပေးလည်း မထူးပါ။
• Genetic makeup breast cancer cells ရင်သားကင်ဆာရဲ့ မျိုးဗီဇ
- HER2 gene ဆိုတာ HER2 gene မိတ္တူတွေအများကြီးရှိနေမယ်။ Targeted therapy drugs ဆေးသပ်သပ်ရှိနေပြီ။ တခြားမျိုးဗီများလည်းရှိတယ်။
- Group 1 (luminal A) ထဲမှာ ER positive နဲ့ PR positive တွေပါတယ်။ ဟော်မုန်းနဲ့ ကင်ဆာဆေးပေးနိုင်တယ်။
- Group2(luminal B) ထဲမှာ ER positive, PR negative နဲ့ HER2 positive တွေပါတယ်။ ဟော်မုန်းနဲ့ ကင်ဆာဆေးပေးနိုင်တယ်။ targeted to HER2 ကိုပါပေးနိုင်သေးတယ်။
- Group3(HER2 positive) ထဲမှာ ER negative နဲ့ PR negative, but HER2 positive တွေပါတယ်။ ကင်ဆာဆေးနဲ့ treatment targeted to HER2 နည်းပေးနိုင်တယ်။
- Group4(basal-like) ကို triple-negative breast cancer ခေါ်တယ်။ ER negative, PR negative and HER2 negative တွေပါတယ်။ ကင်ဆာဆေးပေးရတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရလို့ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိမှ သိလာတာမျိုးဖြစ်တယ်။ ကုသရာမှာ အထူးဂရုစိုက်ရတယ်။ ခွဲဘို့လိုအပ်ရင် ခွဲနိုင်ပါတယ်။ ကင်ဆာဆေးလိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်။ ဟော်မုန်းပေးကုရင် ဘာဖြစ်မလည်းတော့ တိတိကျကျမေပြောနိုင်သေးပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မွေးပြီးအထိစောင့်ပါ။ မိခင်က ကင်ဆာဖြစ်နေလို့တော့ အထဲကကလေးဆီမကူးပါ။
မလိုတာကို ပိုပြီးမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ စိတ်ကိုအပြုသဘောဆောင်ပါ။ ကံတရားကိုလည်း အားကိုးပါ။
လုပ်သားပြည်သူနှင့် ဦးကြီးဟု အခေါ်ခံရသူများ၏ စကားဝိုင်းမှာ ပြောကြတယ်။ လုပ်သားပြည်သူ- အဲဒါ ငစိန်နဲ့ မီးဒုန်းခေတ် ဦးကြီး - ဆန်တပြည် ၆၅ ပြ...
► 2020 (2010)
► 2019 (2898)
▼ 2016 (2221)
Japan model ဂျပန်နမူနာ
November Morning နိုဝင်္ဘာ နံနက်ခင်း
Tortoise upside down လိပ်
Language Law ဘာသာစာပေစောင့်ဥပဒေ
Dos and Don’ts for Common Colds အအေးမိရင် ရောင်ရန်...
The Three Musketeers သရီး မာစကက်တီးယား
Griseofulvin မိုးတောင်က၊ ပွေးပေါင်က၊ ဆေးအတု တရုပ်ြ...
Fatty Liver Disease (FLD) အသည်းအဆီဖုံးခြင်း
Maternal mortality မိခင်များ မီးတွင်းသေဆုံးခြင်း
Sweeping broom တံမြက်စည်းလှည်းနည်း
Each and every one ကိုယ်စီကိုယ်ငှ
Prenatal Diagnosis of Microcephaly ကိုယ်ဝန်မှာ ကလေ...
Urinary Incontinence in Women အမျိုးသမီး ဆီးမထိန်း...
My Parents အမေ-အဖေ့ ဓါတ်ပုံ
Zika Writings ဇီကာစာများ
Male contraceptive injection shows promise
လောကသာရပျို့မှာ တ ကို တစ်လို့မရေးပါ
Microcephaly ဇီကာနဲ့ ခေါင်းသေးသေးနဲ့ကလေး
Insecticide-Treated Bed Nets ခြင်ထောင်ကို ခြင်ဆေးစ...
Piles and Pregnancy ကိုယ်ဝန်နဲ့ လိပ်ခေါင်း
Rich and Poor Nations ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ဘာကြောင့်ပါလဲ
Cheers ခြီးကြူး နဲ့ ချီးကျူး
ကြေ ကျေ ကြော် ကျော်
လှည့် နဲ့ လှဲ့
Pregnancy, Folic acid and Albendazole ကိုယ်ဝန်၊ ဖေ...
Handicapped doctor at midnight လကွယ်ညသန်ကောင်ယံ
Doctors ဆ ဆရာဝန်
လင်းယုန်ဂျာနယ်အမှတ် ၃၆ (ဩဂုတ် ၁၉၅၂)
The End ပြီးပါပြီ
Political readings နိုင်ငံရေးဖတ်စာ
Storing Rice အသိုးကို အိုးပြောင်းမထည့်ပါနဲ့
Color of Democracy ဒီမိုကရေစီမှာ ဘာရောင်ရှိသလည်း
Colors of Painting ပန်းချီကား၏အရောင်များ
Colors of Politics နိုင်ငံရေး အရောင်များ
Zinc oxide cream ဇင့်အောက်ဆိုက်ခရင်မ်
Fall Season အစိမ်းရောင်၏ အနိစ္စ
Microgynon ကိုယ်ဝန်တားဆေးနှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုးကွယ်သူ...
Ice and Heat ဒဏ်ရာရရင် ရေခဲတင်ရမှာလား အပူကပ်ရမှာလား
Once UponaTime တခါတုန်းက
Myocardial ischemia နှလုံးသား သွေးမဝခြင်း
Men on the Chair ကုလားထိုင်ပေါ်က လူကြီးများ
Coronary calcium scans နှလုံးရောဂါအတွက် ကယ်လ်စီယမ်...
Ghost Rider တစ္ဆေ သို့မဟုတ် တစ် အသုံးမှန်များ
Sand Creek Born ယမားဘေး မွေးခဲ့တဲ့သူ
Autumn သစ်ရွက်ကြွေ နွေမဟုတ်
Healthy Habits ကျန်းမာရေးယဉ်ကျေးမှု
Early Morning စောစောစီးစီး
Cyclone Brewing In Bay Of Bengal
Fluoroquinolones Are Too Risky for Common Infections
Sacred Words ဆု
Blind Followers အလိုတော်ရိ သတ်ပုံ
White House goes pink for Breast Cancer Awareness ...
Ronaldo's disrespects Buddha on social media ရော်န...
Old wives' tale မိန်းမကြီးများပုံပြင်
Burmese doctor မြန်မာစာ ဆရာဝန်အတွက် ပိုအရေးကြီး
99-Word Stories ၉၉ လုံးသောစကား
Household medicines အိမ်သုံးဆေးများ
Love From Far Away မတတ်သာ ခပ်ခွါခွါထက်ဝေး
Biotin supplement ဘိုင်အိုတင် အားဖြည့်ဆေး
Shaken baby syndrome ကလေးနှိပ်စက်ခံရခြင်း
Oh dear Chindwin ချင်းတွင်းသို့
Meningioma ဦးနှောက်အကျိတ်တမျိုး မင်နင်ဂျီယိုးမား
Weed and Weep စိတ်တောကို ရှင်းပါ
India Memoir အိန္ဒိယမှာ အထင်ကရ
VOA မခွာညိုကမေးလို့ ဖြေလိုက်တာပါ။